Arm mivezivezy Assembly - China Changzhou Wujin Hengfa Machine
Iantrao Parts for boribory Looms
Iantrao Parts for Winder
MATOAN-NY mivezivezy PUSHER
Arm mivezivezy Assembly
Iantrao ny faritra ho an'ny hafa Shina sy nafarana kasety extruding looms tsipika sy boribory.
Products nanome: milina faritra ho an'ny isan-karazany plastika boribory fanenoman-damba, Tape miezaka andalana, fehy fanenoman-damba sy ny Jumbo kitapo sns Isika no lehibe indrindra tamin'ny faritra ambony indrindra mpamatsy vola-mahomby entana.
Vola aman-karena us:
1, ORINASA MPANAMBOATRA amin'ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fanaraha-maso ny fanondranana daty
2. Arivo ny fanenoman-damba sy ny winder faritra, be be Output, fanaraha-maso ny vola lany.
3. isika hanome ampahany amin'ny ankamaroan'ny Shina toa olana sy winder orinasa, dia manana fahalalana ampy eo amin'ny fanenoman-damba sy ny kasety andalana mamelatra ny lanitra. Ary koa ny ampahany mamokatra mora foana namboarina.
Ny fangatahana, azafady niampatrampatra tsy misalasala mba hifandray ahy.
Manaraka: mivezivezy Body
4 mivezivezy boribory haraka
4 mivezivezy boribory fanenoman-damba faritra
4 Shuttles Plastic boribory haraka
6 mivezivezy boribory fanenoman-damba faritra
8 mivezivezy faritra boribory haraka
Boribory haraka mivezivezy
Valo mivezivezy boribory fanenoman-damba
High Speed enina mivezivezy boribory fanenoman-damba
Plastika boribory valo mivezivezy haraka
p W lafaoro mivezivezy boribory fanenoman-damba
Mivezivezy boribory haraka
mivezivezy fanenoman-damba Machine
Mivezivezy kodiarana for boribory haraka
enina mivezivezy boribory fanenoman-damba
Enina mivezivezy faritra boribory haraka
Six mivezivezy haraka
Fanenomana mivezivezy haraka
Weaving mivezivezy fanenoman-damba milina
Back Bobbin Shaft Stand
Address: Zhaiqiao Industry Park, Changzhou, Jiangsu, Sina